NgoJuni 16, iBeijing yabamba uchungechunge lwezingqungquthela zabezindaba ukugubha iminyaka eyi-100 kwasungulwa iqembu lamaKhomanisi laseChina, "iBeijing Likhuthaza Ngokuphelele". Emhlanganweni, uKang Sen, iphini likanobhala weKomidi Likamasipala Wezolimo Nezomsebenzi eBeijing, iphini lomqondisi we-t ...
Iketela likagesi livame ukusetshenziswa ezimpilweni zethu, kufaka phakathi ekhaya noma ehhotela. Lapho sifuna amanzi ashisayo, iketela likagesi lingahlangabezana nezidingo zethu, kepha amanye amaketela kagesi angajwayelekile angasilethela ingozi, ngakho-ke lapho sibhekene nemikhiqizo ehlukahlukene yeketela likagesi emakethe, yini okufanele siyenze? ...
Isikali sesisindo se-Glass Electronic CW275 siyisikali esisebenza ngokunemba okuphezulu nezinzwa ezi-4 ezizwela kakhulu, ezingalinganisa isisindo sakho ngokunembe kakhudlwana, kepha kufanele unake ukusebenzisa kahle, uma kungenjalo, isisindo sizokwenzelela futhi sithinte isilinganiso. Ngakho-ke ungayisebenzisa kanjani i-Glass Electronic Weight S ...
Amanani Amanani Aphansi Okutshalwa Kwezimali Ehhotela Esiwumbhadane Akakafiki
Izinkampani eziningi ezinkulu zamahhotela emhlabeni aziphendulanga ngempumelelo enkingeni yomqedazwe. Kepha basafuna ukuthuthukisa umbono wokuthi ubaluleke kakhulu kunethiwekhi yomhlaba ukwedlula i-opharetha ezimele. Abasebenza kancane badinga ukwamukela lo mqondo ukuze babambe ithuba ...
Ngabe Abakhiqizi Bakuqinisekisa Kanjani Ukuphepha Kwe-Hair Dryer
Umqondo oyisisekelo ngemuva kwezomisi zezinwele ulula impela, kepha ukukhiqiza eyodwa ukuze isetshenziswe ngobuningi kudinga ukucabanga kanzima ngezici zokuphepha. Abakhiqizi bezinwele kufanele babikezele ukuthi isomisi sabo sezinwele singasetshenziswa kanjani kabi. Bese bezama ukuklama umkhiqizo ozophepha ngohlobo olubanzi kakhulu o ...
Amahhotela aseBulgaria Kumodi ye-COVID-19: Kusetshenziswa Kanjani Ukuqapha
Ngemuva kwesikhathi eside sokungaqiniseki okukhulu nokwesaba okukhulu, izimbobo zaseBulgaria sezikulungele ukwamukela igagasi elingenayo lezivakashi kule sizini. Izinyathelo zokuqapha ezihlobene nobhubhane ezikhona ngokwemvelo ziye zaba esinye sezihloko okuxoxwa ngazo kakhulu kumongo weBulgaria. Labo ...